Semalt: Malware မှဝေးဝေးရှောင်နည်း
Malware ဆိုသည်မှာ malicious malware ဟူသောစကားလုံးမှစတင်သည်။ malware ပါ ၀ င်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကန့်သတ်ချက်များမရှိပါ။ ထို့ကြောင့်၊ malware သည်အရိုးရှင်းဆုံးပုံစံဖြင့်လူတစ် ဦး ၏ကွန်ပျူတာထဲသို့တရားမဝင်ဝင်ရောက်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ သင်၏ကွန်ယက်ထဲသို့တရားမ ၀ င် ၀ င်ရောက်နိုင်ရန် software ၏ရည်ရွယ်ချက်သည်ကွဲပြားနိုင်သည်။ သို့သော်၊ ၄ င်းသည်သင်၏ကွန်ပျူတာထဲတွင်တရားဝင်ရည်ရွယ်ချက်မရှိသောကြောင့်၎င်းကို malware အဖြစ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသည်
Semalt ၏ Customer Success Manager, Ivan Konovalov, malware ဝင်ရောက်ခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်ဘာလုပ်ရမည်ကိုသိသည်။
အစောပိုင်းက malware အမျိုးအစားများသည် developer များအနေဖြင့်သူတို့၏စွမ်းရည်ကိုပြသရန်ကြိုးစားခဲ့ပြီး ၄ င်းတို့၏ပစ်မှတ်များကိုနှောင့်နှေးစေသည်။ တစ်ခါတလေသူတို့ကသူတို့ကိုပြက်လုံးတွေပို့နိုင်တယ်။ နောက်ပိုင်းဗားရှင်းများသည် ၄ င်းတို့ကိုပိုမိုအန္တရာယ်ရှိသောကြောင့်၎င်းနှင့်၎င်းနှင့်ဆက်စပ်သောဆော့ဝဲလ်ကိုဖျက်ခြင်း (သို့) အကျင့်ပျက်ခြင်းအားဖြင့်ဒေတာများကိုပျက်စီးစေနိုင်သောကြောင့်သတိပြုရန်လိုအပ်သည်။ မျက်မှောက်ခေတ်ဝက်ဘ်တွင်စျေးကွက်ရှိ malware ပရိုဂရမ်အများစုသည်ငွေရှာရန်ဖြစ်သည်။
နည်းပညာအရ malware သည်ယေဘူယျဝေါဟာရဖြစ်ပြီးခြိမ်းခြောက်မှုအမျိုးအစားများစွာကိုရည်ညွှန်းနိုင်သည်။ ၎င်းတို့တွင်အောက်ပါတို့ပါဝင်နိုင်သည် -
၁။ ၎င်းတို့သည် executable files များကိုပစ်မှတ်ထားသော virus များဖြစ်နိုင်သည်။ အသုံးပြုသူသည် software ထည့်သွင်းသောအခါ virus သည် system ရှိအခြားအရေးကြီးသောဖိုင်များသို့ပျံ့နှံ့သွားသည်။ အသုံးပြုသူမှအီးမေးလ်ပူးတွဲဖိုင်ကိုဖွင့်ခြင်းကဲ့သို့သောဗိုင်းရပ်စ်သည်ကွန်ပျူတာကိုသာကူးစက်နိုင်သည်။
၂. Worms ဆိုသည်မှာကွန်ပျူတာကွန်ယက်များမှတဆင့်ပျံ့နှံ့သွားသော malware ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ သူတို့ကဗိုင်းရပ်စ်တွေနဲ့နီးစပ်တယ်။ ၎င်းတို့သည်အင်တာနက်မှအပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ထားသည့်ကွန်ယက်တစ်ခုအနေဖြင့်ကြီးမားသောဖြစ်နိုင်ချေများကြောင့်ပြန့်ပွားရန်အခွင့်အလမ်းများစွာရှိသည်။
၃။ Trojan horse များသည် hacker များ၏လက်နက်များဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည် malware များကိုဖုံးကွယ်ရန်အသုံးပြုသော anti-malware မှရှောင်ရှားရန်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းတို့သည်တရား ၀ င်ဆော့ (ဖ်) ဝဲပုံစံကိုယူပြီးဒေါင်းလုပ် လုပ်၍ တပ်ဆင်သောအခါအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။
၄. Rootkits သည်အခြား malware များကိုဖုံးကွယ်ရန်နှင့်ဖုံးကွယ်ရန်အတွက် operating system ကိုပြုပြင်သည်။ ၎င်းတို့သည်သူတို့ကိုယ်တိုင်အန္တရာယ်မပြုသော်လည်းအခြား malware များကိုတားဆီးသောကြောင့်ပြofနာများ၏ရင်းမြစ်ဖြစ်သည်။
၅။ တိုက်ခိုက်သူများသည် system ၏လုံခြုံရေးကိုအလျှော့ပေးသည့်အခါ backdoors ပေါ်လာမည်။ ၎င်းတို့သည်အသုံးပြုသူအားလုံး ၀ ပိတ်ပစ်ခြင်းကိုအထောက်အကူပြုပြီးအခြား malware များတပ်ဆင်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသောဟက်ကာများကအဝေးမှဝင်ရောက်ခွင့်ကိုမြှင့်တင်သည်။
၆။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုခိုးယူရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်အသုံးပြုသူ၏သတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းပေးသောအခြား malware အမျိုးအစားတစ်မျိုးဖြစ်သည်။
၇။ နောက်ဆုံး malware အမျိုးအစားမှာအခမဲ့ပရိုဂရမ်များကိုကမ်းလှမ်းသောပေါ်လွင်သော adware ဖြစ်သည်။ အများအားဖြင့်၎င်းတို့သည်ကုမ္ပဏီများသည်ဖွံ့ဖြိုးရေးကုန်ကျစရိတ်များကိုပြန်လည်ကုန်ကျရန်ကုန်ကျစရိတ်များကိုလျှော့ချနိုင်သည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။
malware များကိုရှောင်ရှားခြင်း၏ရွှေစည်းမျဉ်းသည်ဆော့ဖ်ဝဲ (သို့) အတည်မပြုရသေးသောသို့မဟုတ်အတည်မပြုနိုင်သောမည်သည့်အရာကိုမဆိုဖွင့်ခြင်းသို့မဟုတ်ထည့်သွင်းခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ လူတစ် ဦး သည်၎င်းတို့နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုမရှိသော ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုပေါ်သို့အဆုံးသတ်သွားပါက၎င်းမှ၎င်းမှမည်သည့်အရာကိုမျှဒေါင်းလုပ်မချရန်သေချာစေသင့်သည်။ သင်၏ဆော့ (ဖ်) ဝဲနှင့်အခြားမီဒီယာများရရန်တစ်ခုတည်းသောနေရာမှာဂုဏ်သိက္ခာရှိသည့်ဆိုက်များသို့မဟုတ်ကူးစက်မှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်အကျွမ်းတဝင်ရှိသောသူများဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ဆော့ (ဖ်) ဝဲတွင်ဒီဂျစ်တယ်လက်မှတ်မပါရှိပါက ၀ က်ဘ်ပေါ်တွင်၎င်းနှင့်အခြားလူများကဘာပြောနေသည်ကိုကြည့်ရှုရန်၎င်းကိုအမြဲတမ်းရွေးချယ်နိုင်သည်။ ပေါ်လာသောအစီရင်ခံစာများ၊ တိုင်ကြားချက်များသို့မဟုတ်ဆိုက်နှင့် ပတ်သက်၍ ထူးဆန်းနေပုံရသောအရာများသည်၎င်းကိုသီးခြားထားရန်အချက်ပြသင့်သည်။ ထပ်ဆောင်းအားသာချက်တစ်ခုမှာအင်တာနက်ရှိသည်